PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-12-02 - Ubunzima kojoyine ipirates engathandi
Ubunzima kojoyine ipirates engathandi
Umahachi kuthiwa usefuna ukubuyela kwi-arrows
Ilanga langeSonto - 2018-12-02 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
USEFUNA ukubuyela ekilabhini yakhe yakudala umdlali othengwe yi-orlando Pirates ngokuqala kwesizini nokho osekuvela ukuthi akasathandi ukuba yingxenye yale ki-labhu eholwa ngu-irvin Khoza.
Ibucs isayinise ukudakwashe Mahachi odlala esiswini ekuqaleni kwesizini esuka kwilamontville Golden Arrows. Uthengwa kwiArrows nje, ubevutha engabaselwe futhi engomunye wabadlali abamqoka kuyona. Selokhu efike kwibucs usephenduke ifenisha njengoba isikimu engasitholi ikakhulukazi emidlalweni yeligi.
Leli phephandaba lithole ukuthi lo mdlali ufuna ukubuyela kwi- Arrows njengoba kwasekuqaleni wayengakuthandisisi ukuyodlalela ibucs. Kuthiwa into emkhathaza kakhulu emoyeni yikhona ukungadlaliswa futhi uyazibonela nje ukuthi kuzokuba nzima ukuba athole ijezi kumabhakabhaka.
“Umahachi ujoyine ipirates evele engayizwa emithanjeni yakhe. Uyile nje ngoba ubehlonipha usihlalo wayo nomato Madlala ongusihlalo we-arrows abanobudlelwano obuhle. Nokho impilo kayiyinhle kahle kwipirates, usefuna ukubuyela emuva. Uyabona ukuthi ithimba labaqeqeshi ngeke limudlalise njengoba ebuye angangeni ngisho kwi-18 emidlalweni yeligi.
“Yiyona into eholele ekutheni angabi nawo umdlalo omuhle ngesikhathi ipirates imbophele kowecaf (ipirates) ihlula ilight Stars ngo-5-1. Kulo mdlalo kuvele kwacaca ukuthi inhliziyo yakhe kayikho kwibucs, ufuna ukubuyela ethekwini,” kusho umthombo oncikene kakhulu nomahachi.
Umilutin “Micho” Sredojevic ololonga ibucs, usamile ekutheni usazobanika ithuba bonke abadlali abasha.
“Akekho umdlali esingeke simunike ithuba, naye usazolithola siyeza isikhathi sakhe. Bonke abadlali esibalandile sibasayinise ngenhloso ngoba isazocinana kakhulu imidlalo yethu. Kuza isikhathi esinzima ngakho-ke wonke umuntu kufanele ahlale elindele ukubizwa,” kusho usredojevic.
UKUDAKWASHE Mahachi okuvela ukuthi akasathandi ukuba ngumdlali webucs.